छालामा आउने सेतो दाग के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? – Janasamsad
छालामा आउने सेतो दाग के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ?
आइतबार, कार्तिक २३, २०७७ १३३०३१
काठमाडौं । कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरको विभिन्न भागको छालामा अस्वाभाविक सेतो दाग देखिन सक्छ । दाग कालो होस् या सेतो । स्वाभाविकभन्दा फरक भएपछि जस्तोसुकै दागले पनि सुन्दरतामा असर गर्छ ।
छालामा रंगको निर्माण गर्ने कोशिकाहरू नष्ट भएपछि दाग देखिने समस्याहरूको सिर्जना हुन्छ । यी कोशिकाहरूलाई मेलेनोसाइट्स भन्ने गरिन्छ । सेतो दागले आँखालाई समेत प्रभावित गराउन सक्छ ।
सेतो दागको संकेत र लक्षणमा छालाको रंग खराब हुनु या सेतो हुनु, शरीरको कुनै पनि भागको छालामा दाग उत्पन्न हुनु आदि रहेका हुन्छन् । यस्तो दाग शरीरको एक भाग या धेरै भागमा पनि देखिन सक्छ ।
सेतो दाग कतिको गाढा हुन्छ भन्ने आधारमा त्यसलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ ।
१. शरीरको केवल एक हिस्सा या कुनै भागमा हुने दाग
२. शरीरको एक हिस्सामा देखिने दाग
३. शरीरको कैयौं हिस्सामा हुने
सेतो दागको सबैभन्दा सामान्य प्रकार भनेको सामान्यकृत विटिलिगो हो । भनिन्छ कि यसमा शरीरको कुनै पनि भागमा भएको सेतो दाग, शरीरको अन्य भागमा फैलिन लागेको हुन्छ ।
सेतो दागका मुख्य लक्षणहरू
१. छालाको रंग फिका हुँदै जान्छ या सेतो हुँदै जान्छ ।
२. समयभन्दा पहिले टाउकोको कपाल दारी, आँखीभौं वा परेला आदिको रंग उड्ने या सेतो हुने गर्छ ।
३.नाक र मुखको भित्र छालाको रंग उड्दै जान्छ ।
४. नेत्रगोलक यानी रेटिनाको भित्रको रंग फिका हुँदै जान्छ ।
सेतो दागका कारण शरीरमा कस्तो कस्तो अन्य रोगको सम्भावना हुन्छ ? भन्ने कुरा बताउन मुस्किल हुन्छ । कैयौं पटक बिनाकुनै उपचार नै नयाँ दाग बन्न पनि हुने गर्छ । तर धेरैजसो सेतो दाग बढ्दै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ । यो बिस्तारै लगभग शरीरको सबै हिस्सामा फैलिन पुग्छ । यस्तो धेरै मामला थियो, जसमा छालामा पुरानै जस्तो रंग फिर्ता पाउनमा सफल हुने गर्छ ।
विभिन्न कारणले शरीरमा सेता दागहरू आउने गर्छ
एक यस्तो विकारको अवस्थामा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयंले रंग उत्पादन गर्ने कोशिकाहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ ।
२. स्वप्रतिरक्षित रोग जस्तै स्वप्रतिरक्षित थाइराइड रोग या टाइप १ डायविटिजको प्रभाव पनि पर्न सक्छ ।
३. छालामा अत्यधिक गर्मी हुनु, तनाव या औद्योगिक केमिकल्स आदिको सम्पर्कमा आउनु पनि सेतो दागका कारणहरू हुन् ।
४.परिवारमा पहिले कसैलाई यस्तो समस्या हुनु ।
तल केही टिप्स बताइएको छ जसले सेतो दागबाट बच्ने उपाय सिकाउँछ ।
२.प्रभावित छालालाई जोगाउनु
३.ट्याटुको प्रयोगमा रोक
शरीरमा ट्याटु नबनाउनु या बनाउनु विटिलाइगोको उपचारसँग सम्बन्धित छैन । तर भयावह कुरा यो हो कि टाटुबाट छालालाई भने ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । टाटुबाट प्रभावित छालामा कैयौं पटक २ हप्ताभित्र सेतो दाग सम्बन्धी समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।
सेतो दागको उपचार
सेतो दागको उपचारको लागि विभिन्न उपचार विधि अपनाउन सकिन्छ । एकातर्फ मेडिकल विधिमार्फत् यसको उपचार गर्न सकिन्छ भने अर्को तर्फ घरेलु एवं सौन्दर्य प्रसाधनमार्फत पनि उपचार गर्न सकिन्छ । जुन निम्नानुसार छन् ।
१.दागमा लगाउने क्रिमको प्रयोग
२. खानको लागि औषधि
३. एक उपचार जसमा प्लस अल्ट्रा वायोलेट लाइटको उपयोग गर्ने गरिन्छ ।
४. यदि दाग ज्यादातर शरीरमा फैलिइसकेको छ । बाँकी शरीरको हिस्साले समेत रंग उतार्न सकिन्छ । ताकि असामान्य हिसाबले कम गर्न सकिन्छ ।
सर्जिकल उपचारलाई पनि यसको समाधानको लागि सामेल गर्न सकिन्छ । अन्य उपचारमा परामर्श र समर्थन, सनस्क्रिन एवं प्रशाधन सामग्री जस्तो मेकअपले पनि सेतो दागलाई रोक्न सकिन्छ ।